China otomatiki evana masiki muchina fekitori uye vagadziri | Kunyengera
Otomatiki vana masiki muchina
Yakazara otomatiki masiki evana ese ari muchina mumwe mhando nyowani yemidziyo yakagadzirirwa vatengi kugadzira maJapan emasikisi emasikisi. Iyo inoshandisa 1 ~ 4 zvidimbu zvePP yakarukwa isina-yakarukwa machira, yakamisikidzwa kabhoni uye kusefa zvinhu sekudyisa zvinhu. Iyo mask inogadzirwa neiyo ultrasonic tekinoroji. Iyo maski ine yakajeka embossing, yakasimba yekutengesa uye nekukurumidza kumhanya, iyo inosangana nezvinodiwa zvekuita kwechigadzirwa. Dhizaini yemask inonyatsoenderana neyekuyera yeEuropean neAmerica, uye inoshanda zvakakwana otomatiki. Muchina wese unoumbwa nefuremu yezvinhu, kuumba, kuwacha lug, kupeta kutenderera uye zvimwe zvikamu. Iyo otomatiki yevana masiki muchina inongogadzira chete inoraswa masiki masiki, asi kwete N95 uye stereo masks.
Kunyangwe iyo masiki ndeyekurapa haina chekuita nemuchina. Iyo maski inogadzirwa neichi chishandiso inogona kushandiswa seyekuvhiya mask chero bedzi ichinge yaiswa utachiona. Muchina uyu unotora PLC yekubata chinovhara kutonga. Iyo huru yekutakura bhandi inotakurwa neyechete-chikamu mota, iyo yekutsika mota inopidigurwa, kufambisa kwakarurama, iko kudzora kwakadzikama, uye kumhanya kuri kuchinjika
1, The nomoto mugumisiro wakanaka uye kukundikana zvazvingava yakaderera;
2, Iyo yekumhanyisa kumhanya inoshanda, iine 80-100 mapiritsi paminiti, ayo anogona kugadzirwa achienderera kwemaawa makumi maviri nemana;
3, Computer PLC kuronga kudzora, servo drive, yakakwira degree of otomatiki;
4, Shamwari yemurume-muchina interface, isina kujairika michina uye kushomeka alarm, skrini kutungamira kuti ubate neasina kujairika nekukurumidza.
Chigadzirwa zita otomatiki evana masiki muchina Kukura kwemidziyo L3600xW3500XH2000 （mm）
Chigadzirwa chigadzirwa VANHU-650B kumanikidza 5 ~ 8kg / cm²
Equipment simba 2700W
kugadzirwa kwekugadzirwa 50 ~ 70pcs / min Equipment uremu ≤3000kgNezve ≤ 3000kg
Chinyorwa cheakajairwa ekupfeka zvikamu
Bhiriji remhino rinocheka
1 3 mwedzi
2 3 mwedzi
Wuru Welding musoro
4 3 mwedzi
2 6 mwedzi
Hummer bhandi nharembozha
3 3 mwedzi
Nhanganyaya yeanogadzirisa (sarudzo)
Iyo roller furemu muchina iservo inogadzirisa sisitimu inoshandiswa neakakwira kuita yakazara yekubata skrini. Inonyanya kushandiswa kuteedzera zvinhu kumucheto, track track uye musiyano degree. Iyo inokodzera otomatiki kudzora kwekugadzirisa kutsauka pakati pekuumburuka zvinhu. Iko kutsauka kwezvinhu zvinoverengerwa neiyo ultrasonic, infrared uye CCD sensors, uye mhedzisiro inotungamirwa nemhedzisiro. Iyo mota uye nekodhi mhinduro inoshandiswa kugadzirisa iyo offset zvinhu nenzira kwayo, kunyanya inoshandiswa kune chitupa chisiri-chakarukwa sanitary napkins yekugadzira mutsara, flexo kudhinda, kugadzira bhegi uye mamwe maindasitiri.
1.servomotor kuzvidzidzira-kudzidza: tanga tanga muchina muya mamiriro mamiriro, bata iyo modhi "system parameter yekumisikidza switch kiyi" kupinda muhurongwa parameter yekumisikidza main interface, tinya "otomatiki sitiroko yekuzivisa bhatani" kutanga kubva pakudzidza. Iyo mota inomhanya ichidzoka uye mberi, uye kudzidza mutoro uye sitiroko otomatiki, kuti uwane yakanyanya kushanda nyika. Mushure mekupedza, mutungamiriri anodzokera ku "manual" nyika.
2.manual state press "kuruboshwe" kiyi, gadzirisa kutsauka kunofamba kuruboshwe, pinda "kurudyi" kiyi, gadzirisa kutsauka kunofamba kurudyi, kana nzira yakatarisana, inogona kudzvanya "system paramende set switch switch" kiyi yekupinda "system parameter yekuisa master interface ", tinya" mota seti bhatani "kuti uenderere mberi neruoko gwara shanduko, wobva wadzvanya" yekubuda yekumisikidza bhatani "kuti urege, Ipapo iro bhuku remanyorero ratendeuka.
3.pinda iyo "otomatiki kururamisa" nyika, sarudza kana otomatiki nzira iri chaiyo, kana iyo nzira iri pakatarisana, chinja ku "bhuku kururamisa" nyika, zvinoenderana ne "seti otomatiki mamiriro mota yakanaka uye yakaipa tendeuka polarity" chinja mota nzira, ipapo otomatiki mirayiridzo ichashandurwa.
4.this danho rekururamisa sisitimu inogona kumhanya zvakajairika, iyo "bhuku rekururamisa" nyika inogona kumisikidzwa ne "system parameter yekuchinja mabhatani" mu "system paramende yekuisa master interface". Iyo parameter inoenderana inogona kugadziridzwa, uye kugadzirisa kweanonzwisisa kazhinji hakukurudzirwe kuve kwakanyanya kukura kana kudiki kwazvo.
1 Chinyorwa chemira chakamira: Iri basa riri mu "otomatiki" nyika. Kana izvo zvinhu zvikaerekana zvatyoka kana kupedzisa kumhanya, iko kururamisa hakumhanye kusvika kumagumo kusvika kumagumo, asi kunonoka kwenguva yakati (nguva yekunonoka inogona kuiswa). Iyo yekumisikidza yekuisa interface inoiswa ku "On" kana izvo zvinhu zvatemwa.
2 kudzora kwekunze: iri basa rinodzora "otomatiki" uye "bhuku" kuchinjika nemasaini ekunze, apo "auto" uye "COM" zvakabatanidzwa-zvakapfupi, Chinja ku "otomatiki" uye chinja ku "bhuku" kana wabviswa. Iyi ficha inogonesa kugadzirisa kweoffset kuti ichinjire ku "otomatiki" apo chishandiso chinomhanya, chinomira kuchinjira ku "bhuku" uye chobva chawedzera kungwara. Iri basa rinoda kudzorwa nechokunze munzvimbo yeremote control maseru.
3 Alarm kuburitsa: iri basa riri mukugadziriswa kwezviitiko zvemuganho, kuwandisa, pamusoro pazvino uye mamwe mamiriro, iyo relay ichavharwa kuti ipe yekumira chiratidzo kune yekunze.
Zvakajairika zvikanganiso muAppendikisi uye avo Mhinduro
Iko hakuna kuratidzwa mushure mekupihwa magetsi, uye chiratidziro hachina kupenya Tarisa kuti iyo DC24V kuburitswa kwesimba magetsi kwakajairika, tarisa kana tambo yemagetsi iri mune yakanaka mamiriro, kana iyo plug yemagetsi iri mukutaurirana kwakanaka, uye kana iyo kubatana kwakarurama kana kwete, wozoivhara zvakare.
2.Dhiraivha haigone kudzikisira chinzvimbo
1) .tarisa kana kubatana kuri kwechokwadi uye mubatanidzwa uri mukutaurirana kwakanaka, plug uye dhonza zvakare
2) .Zvichienderana ne "system paramende yekumisikidza switch bhatani", iro rekushandisa gadziriso modhi rinotamisirwa muiyo system paramende yekuisa main interface, uye tinya "otomatiki sitiroko yekuziva kiyi" kutanga kuzvidzidzira kudzidza. Iyo servo mota inozvidzidzira - cherekedza kana paine shanduko mukukosha kwebhawa chati muchiratidza mota chinzvimbo.
1) .tarisa kana kubatanidza kana synchronous pulley yakasununguka kana bhandi raputsika
2) .Paradzanisa dhiraivha kubva mudura uye tarisa kana chikamu chemakanika chakanamatira kana dhiraivha yekukwira haina kukwana.
4. Iyo dhiraivha inoshanda nemaoko uye otomatiki chete munzira imwechete
1) .Check kana iyo sensor wiring yakarurama.
2) .Shandisa izvo zvinhu kuvhara iyo sensor kuti uone kana uchikwanisa kuchinja mafambiro, kana uchikwanisa, switch polarity ichave yakajairwa
3) .Check kuti uone kana iyo sensor tambo yakasununguka kana yakatsemuka.
4) .Tarisa kusarudzwa kwenzwi kwakarurama?
Ultrasonic AE-210 inokodzera zvese zvishandiso zvisina mesh
Infrared AE-100 inokodzera zvinhu zvine mesh (ona kuti haigone kuiswa muzuva rakananga)
Ruvara standard optoelectronic AE-90 inokodzera kutevedzera ruvara mune yakaderera kumhanya michina
CCD mufananidzo AE-400 inokodzera yepakati uye yekumhanyisa zvinhu, senge pamupendero, mutsetse, ruvara, nezvimwe.
5) .Driver jitter yakakura kwazvo. Maitiro ekugadzirisa: Iyo kukosha kwekuwana yakadzikiswa pane iyo yekuisa yekuisa interface.
5 Kugadzirisa chinotenderera kumashure nekudzungaira kusvetuka kwakakura kana kusanzwisisa: tarisa kana izvo zvinhu zvichitsvedza pane mupumburu, zvinogona kuwedzera kushushikana kana kuwedzera kukweshera kwemupumburu; pfuma inogona kugadziriswa; sensor inogona kuve padhuze sezvinobvira kune iyo swing roll; Tarisa mukaha pakati pemutyairi uye chikamu chemakanika.
6.Iyo mainframe yechigadzirwa haishande nemazvo kana isati yatanga uye haigone kushanda mushure mekutanga
1) .Manual state occlusion sensor, ratidza kutsauka kwezvinhu pane mutungamiriri, bhairi kukosha kukosha kuwedzera
2). tarisa kana paine masimba emagetsi ekupindira padhuze nemutongi uye sensor, tsaura uye dzokezve
3) .Connect chishandiso kune yepasi waya yeichi chigadzirwa
4) .Check kana tambo uye dhiraivha tambo dzakatenderedza neiyo yepamusoro-simba mota tambo, ndokumbira uparadzanise bvunzo
5) .Check kana tambo akatyora rabha kana zvakaipa kuonana
6.) heck kana V- uye PE idunhu pfupi
7.Material electrostatic inonyanya kukura: sensor uye controller zvakateerana pasi waya, sensor sekukwanisika yakanamatira pakati pezvinyorwa, zvakanakisa kuwedzera electrostatic kubvisa midziyo
Pashure: Dhadha muromo maski muchina
Zvadaro: Mabasa uye hunhu hwehove mask muchina
Anti Static Bubble Mucheka, Mask Mugadziri, Kavha Bubble Bhegi, Imwe Dhonza Imwe Mask Machine, Chiso Mask Machine, Mutsvuku Wekutsvuka,